2 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st June 2009, 7:16 pm
3 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st June 2009, 8:52 pm
4 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th June 2009, 3:20 pm
ဆွေးနွေးပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..
5 မင်္ဂလာပါ on 15th July 2009, 10:22 pm
6 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th July 2009, 4:55 pm
ကို ဂျိုး... မင်္ဂလာပါဗျာ...
ကြိုဆိုပါတယ်.. သိထားတာလေးတွေ မျှပါဦးနော်...
7 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 16th July 2009, 7:55 pm
8 မိတ်ဆက်ပါရစေ on 24th July 2009, 10:22 pm
ကျနော် နာမည် နေရိုင်းပါ .. အားလုံးခင်မင်နိုင်ပါတယ်
9 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th July 2009, 6:45 am
မင်္ဂလာပါ ကို နေရိုင်းရေ .. ကျွန်တော် တို့ ဖိုရမ် ကို ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ..( ဂုံနီအိတ် ကလေးနဲ့လေ ) .. ဟဲဟဲ ... သိ ထားတာလေးတွေ ကိုလည်း ၀င်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးပါဦး ...
10 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th July 2009, 12:36 pm
11 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th July 2009, 1:51 pm
အပေါ်ကသူတွေက ဆာလာအိတ် တွေ ဂုံနီအိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့... ကျနော် ဘာအိတ်နဲ့ ကြိုရင်ကောင်းမလဲ... အဟဲ.... ကြွပ်ကြွပ်အိတ် နဲ့ ကြိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ.....
မေးတော့မယ်ဆိုဘဲ..... မေးပါဗျာ...မေးထားတာကို သိရင်တော့ ဖြေမှာပေါ့... မသိတော့လည်း မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေရမှာပေါ့...
12 ကျေးဇူးတင်ပါတယ် on 26th July 2009, 11:45 am
$ƴǩǾ wrote: ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ....
ကဲခုလို ၀ိုင်းဝန်းကြိုဆိုကြသူများကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
13 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th July 2009, 1:13 pm
14 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th July 2009, 8:14 pm
15 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th July 2009, 8:18 pm
16 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th July 2009, 8:28 pm
IT field ထဲ ကပဲ ဆိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ် ဗျာ ... မိန်းကလေး IT field က ကျွန်တော်တော့် သိပ်ပြီးတော့ မတွေ့ဘူးဘူးဗျ နည်းတော့နည်းတယ် ..ဆွေ ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် .. ပိုစ့် ကလေးတွေ လည်း တတ်နိုင်သမျှ တင်ပေးပါလို့ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ..
17 Introduction on 4th August 2009, 10:28 pm
ကျတော်လည်းဘာမသိညာမသိ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နဲ့ဝင်တာပါ
ဘာဆိုဘာမှမသိသေးလို့ သင်ပြပေးကြပါဗျို့ ...
18 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th August 2009, 10:31 pm
မင်္ဂလာပါ .. MITR မှ ကြိုဆိုပါတယ် ညီ .. မသိတာရှိမေးပြီး .. သိတာလေးတွေလည်းမျှဝေပေးပါဦး ...
19 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th August 2009, 9:38 am
အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲပေါ့ အသက်ကလည်းအတူတူဆိုတော့ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်ချင်းလည်းအတူတူပေါ့ဗျာ
20 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th August 2009, 5:14 pm
သိတာတွေရှိရင် မျှဝေပြီးတော့ မသိတာတွေရှိရင်တော့လည်း မေးပေါ့....
21 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th August 2009, 8:07 pm
ကျွန်တော်ဆို အသက် 20 လောက်မှ computer ကိုစပြီးကိုင်တတ်တာဗျာ
ကြိုဆိုပါတယ် နွေးနွေးထွေးထွေးပေါ့ (သိမယ်မဟုတ်လား မိုးအရမ်းရွာနေတာ)ဟီး
22 အားလုံးမင်္ဂလာပါ on 25th September 2009, 11:00 am
ကျနော် က Software. E-book Download ခရေဇီ ပါ
တွေ. ရ တာ အားလုံးမင်္ဂလာပါ
23 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 25th September 2009, 11:18 am
24 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2009, 12:22 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] Welcome to .....
25 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2009, 12:40 pm
26 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2009, 12:50 pm
27 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2009, 12:51 pm
28 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2009, 1:02 pm
29 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2009, 6:21 pm
သြော်...ဒီထဲဝင်ကြည့်မိမှ...Admin တို့ရဲ့ profile ကိုကြည့်မိတယ်...ငယ်ကြသေးတာပဲနော်...အသက်ကအမှန်ရောဟုတ်ကြရဲ့လား
30 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th September 2009, 6:32 pm
31 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ နော် on 3rd October 2009, 9:57 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-02
[You must be registered and logged in to see this image.] အဟဲ ... အနော်ကတော့ ပေ့ါနော် ...
ပေါ်ပီ (p0ppy ) လို့ပေ့ါ နော် .. ခေါ်တာပေ့ါနော်
မန္တလေးကပေါ့နော် ... အားလုံးနဲ့ ခင်ချင်လို့ ၀င်ရောက် အရှုပ်တော်ပုံဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ... [You must be registered and logged in to see this image.]
32 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd October 2009, 10:45 am
33 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th October 2009, 10:58 am
$ƴǩǾ wrote: ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်
ပျော်ရိုက်တာနော် .. အားရ ပါးရ ကြို ဆိုတဲ့ အတွက်
ကျေးဇူး တထောကြီးတင် ပါတယ် နော် .. [You must be registered and logged in to see this image.]
34 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 5th October 2009, 1:51 pm
မင်လာပါ ... ကို ပီပေါ် [You must be registered and logged in to see this image.]
ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ပေါ့နော် [You must be registered and logged in to see this image.]
35 ဟိုင်း on 8th October 2009, 1:27 pm
ကို အညတရ နဲ့ ညီ /-tt@Ck3r ပြောလို့ ရောက်လာတာပါ ။ နည်းပညာကို ၀ါသနာပါတယ် ။ ဘာမှတော့မသိပါဘူး ။ တတ်တာ ကတော့ ခြောက်တီ ခြောက်ချက် ပါ ။
နည်းပညာ ၀ါသနာပါတဲ့ ညီအကိုများနဲ့ ခင်ချင်ပါတယ် ။ ကျနော်ပထမဆုံး ၀င်ဘူးတဲ့ မြန်မာ ဖို၇မ်လေးပါ ။
36 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th October 2009, 1:29 pm
ကျနော်ပထမဆုံး ၀င်ဘူးတဲ့ မြန်မာ ဖို၇မ်လေးပါ ။
ဖိုရမ်လေးမဟုတ်ပါဘူး အကြီးကြီး ပါ... ကျွန်တော့်မှာ Monitor တောင်မလောက်ဘူး...
37 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th October 2009, 1:58 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုနေဇော် .. သိတာလေးတွေ မျှဝေပေးပါဗျာ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
38 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th October 2009, 3:50 pm
ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် အားလုံးအတူတူကြိုးစားကြတာပေါ့။
အစ်ကို့အတွက် ပထမဆုံးသော မြန်မာဖိုရမ်လေးဖြစ်သလိုပါပဲ
အစ်ကိုကလည်း ကျနော်တို့ဖိုရမ်ရဲ့ ပထမဆုံးသော Security Admin ပါ။
ဘာပဲပြောပြော လူတော်တစ်ယောက် ဖိုရမ်ကိုရောက်လာတဲ့ အတွက် ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။လေးလည်း လေးစားပါတယ်။ အားလည်းကိုးပါတယ်
39 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th October 2009, 6:39 pm
တကယ်တော့ ကိုအညတရ က ကျနော့်ကို အစ်ကို့မေးလ်ပေးပြီးတော့ စကားပြောကြည့်ဆိုပြီးခိုင်းတာ..
ကျနော်က Hacking ကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားလို့ အစ်ကိုနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အပေါက်အလမ်းမတည့်မှာ စိုးလို့ Hacking စိတ်ဝင်စားတဲ့ /-tt@Ck3r နဲ့ လွှဲလိုက်ရတယ်။
အခုတော့ အစ်ကိုလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။
အစ်ကို့အတွက် ပထမဆုံးဝင်ဖူးတဲ့ မြန်မာဖိုရမ်လေးဆိုတော့ မကောင်းရင်တောင် ပစ်ပြီးတော့မပြေးသွားရဘူးနော်။
ကျနော်တို့ဆီမှာ အစ်ကို့လို လူတော်တွေ တစ်ယောက်မှ မလာလို့ တော်တော်မျက်နှာငယ်ရတယ်။
ကျနော်တို့ အရင်ကခေါ်ထားတဲ့ သူတွေကလည်း အစကတော့ ၀င်ပေမယ့် ၊ ဖိုရမ်က လူနည်းတော့ နောက်ပိုင်းမှာ မရေးကြဘဲ ပြန်ထွက်သွားတယ်။
အစ်ကို့အနေနဲ့တော့ ကျနော်တို့ ဆီမှာ မြဲမယ်ထင်ပါတယ်။
40 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th October 2009, 10:11 pm
အားလုံးကြိုဆိုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကျနော် တကယ်ဘာမှ မတတ်ပါဘူး ။ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးပါ့မယ် ။
ခုလက်ရှိတော့ဘာမှ စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး ။ ကိုဂူဂယ် ကျနော်ကို သူဖတ်ထားတဲ့ scan result ပြပြီးပါပြီ ။site attack ဘာမှ ပြသနာသိပ်မရှိပါဘူး။ ကျနော် scanner နဲ့ ပြန်ဆွဲပေးပါမယ် ။ကျနော် scanner Install မလုပ်ရသေးလို့ [You must be registered and logged in to see this image.] ။ ကိုဂူး ပြတဲ့ result အရ ဆိုရင် ဘာမှ သိပ်မရှိသေးပါဘူး ။ အရမ်းတော့မပြင်နဲ့ပေါ့ ။ ခုလက်ရှီ portal ကတော့ ကျနော်စိတ်ထည်း ဘ၀သိပ်မတွေ့ဘူး ။ အပေါက်ရှိနေမလားလို့ တွေးမိတယ် ။ ကိုအညတရ scan ထည်းမှာ အဲ့ portal မပါဘူး ။ နောက်မှ သေချာအောင်ပြန်ကြည့်ပေးမယ် ။ server injection ကသိပ်ဆိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး ။ဒါကြောင့် security admin လည်းမလိုလောက်သေးပါဘူး ။
itsource နောက်ကြောင်းနည်းနည်းလိုက်ကြည့်တယ် ။ darkbb ကနေယူထားတွေ့ရတယ် ။ ddark bb ရဲ့ host က f26.dnspro.org ကပါ ။ server တည်တာက france ကပါ ။ france server တွေ က ကျနော့် ဗဟုသုတအရ မဆိုးပါဘူး ။ နည်းနည်း နှေးတာတခုပဲရှိမယ် ။ banner ပေါက်တယ် ။ ကြောက်စရာတော့မဟုတ်ဘူး ။ အဲ့ဒါ darkbb ကနဂိုထည့်ထားတာပါ ။ သူုတို့ ကြော်ငြာ ထည့်လို့ရအောင် ။ bot လည်းသူတို့ Prevent လုပ်ထားတာမဆိုးပါဘူး ။ ကျနော် bot တကောင်ထည့်ကြည့်တယ် ။ မ၀င်ပါဘူး ။ကျနော့် bot လေးကနည်းနည်းတော့ date out နေပါတယ်။ သိပ်တော့မကောင်းတော့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် အခြေခံအရ bot ကာကွယ်ထားတယ်လို့ ယုံကြည်လိုက်တယ် ။ site digging နဲ့ admin pw reset ကတော့မစမ်းရသေးဘူး ။ ကျနော်နဲ့ကင်းကွာနေတာကြာတော့ လုပ်ဖို့ နည်းနည်း [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ။ နောက်တော့စစ်ထားပေးပါမယ်။
41 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 11:08 am
[You must be registered and logged in to see this image.] Nice to meet you. [You must be registered and logged in to see this image.]
42 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 7:26 pm
ကျွန်တော့်နာမည် ဒိ ပါ
ကောင်မလေးချောချောဆိုရင် ပိုခင်မင်နိုင်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
43 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 7:36 pm
ကို ဒိ.... ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးတော့ သာ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါလား။ (ကျနော် ခွဲလိုက်ပြီနော်။)
/-tt@Ck3r ဆီကနေပြီးတော့ အစ်ကို့အကြောင်းအနည်းငယ်သိထားပါတယ်။
အစ်ကိုသိထားတာလေးတွေ မျှဝေပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
44 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 7:36 pm
ဘာမှမတတ်သေးဘူးလို့တော့ မပြောပါနဲ့ဗျာ။ အစ်ကိုသာ ဘာမှမတတ်သေးဘူးပြောရင် ၊ ကျနော်တို့ ဘယ်နားနေရမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး။
ကိုဂူဂယ် စစ်ထားတဲ့ Scan Result ကိုတော့ ကျနော်မမြင်ရသေးဘူးဗျ။(မြင်ရလည်း နားမလည်ပါဘူး။ ) ဒါပေမယ့် သူလည်း ပြောပါတယ် ပြဿနာသိပ်မရှိဘူးတဲ့။
အစ်ကို့ရဲ့ Scanner နဲ့ ပြန်စစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေ့ါဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်သာ ပြန်စစ်လိုက်ပါဗျာ။ ကျနော်တို့ကတော့ security ပိုင်းကို ဘာမှမသိလို့ အားလုံးကို အစ်ကို့လက်ထဲအပ်ထားပါတယ်။
ကိုဂူးပြောထားတာကိုက အစ ဘာမှတော့သိပ် မပြင်ရသေးဘူးဗျ။ ပြင်လေပေါက်လေ ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။
ကျန်တာ အားလုံးကို လည်း လိုအပ်မယ်ထင်ရင် စမ်းသာစမ်းပါ။ ပိတ်သင့်တာရှိရင်လည်း ပိတ်ကြတာပေါ့။
အခုလို တကူးတက လာရောက်ကူညီပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။
45 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 8:15 pm
ကျနော် နာမည် က ဘိုဘို ပါ ..... အားလုံး နဲ့ခင် မင် ရင်း နှီး ချင် ပါ တယ်....... သိ လို တဲ့ အရာ များ ကို ဒီ website မှာ ကျနော် လေ့လာ ချင် ပါ တယ် မေးမြန်း ချင် ပါ တယ် ....... Beginner လေး ဆို တော့အားလုံး ကျနော့်ကို ကူညီ ကြ ပါ ခင် ဗျာ
46 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 8:23 pm
47 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 8:24 pm
48 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 8:27 pm
မင်းတို့ MC နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတွေလည်း ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
49 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th October 2009, 9:28 pm
ကျနော်နဲ့ကတော့ လူရင်းတွေပဲနော်။ အတူတူလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ အခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလျက်ပါ။ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
50 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th October 2009, 7:10 am
51 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]